Huawei သည် Kirin 970 ကို၎င်း၏ AI စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အတူထုတ်ပေးသည် Androidsis
Huawei သည် Kirin 970 ကို၎င်း၏ AI စွမ်းဆောင်ရည်များပါသည့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုပြသသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် Huawei သည် Kirin 970 ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်အတုထောက်လှမ်းရေးစွမ်းရည်များပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူမှစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် SoC အသစ်ဖြစ်သည်။
အသုံးအများဆုံးအချက်မှာ CPU နှင့် GPU တို့၏အသွင်သဏ္asာန်များကိုဂရုပြုရန်ဖြစ်သော်လည်း Huawei ၏တင်ဆက်မှုတွင် Kirin 970 ကိုအဆင့်မြင့်တင်ရန်အထူးစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသခဲ့သည် မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာပရိုဆက်ဆာကို AI.
Huawei Kirin 970: ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးထိရောက်မှုရှိသည်
အတုထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုဌာန (NPU) ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အထူးသဖြင့် 970 ၏ CPU နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ စွမ်းဆောင်ရည် ၅၅ ဆပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ၂၅ ဆပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။ တနည်းအားဖြင့် Kirin 970 NPU သည် AI တွက်တွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ စွမ်းအားနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - Kirin 970 သည်တစ်မိနစ်လျှင်ပုံရိပ် ၂၀၀၀ ကိုပုံဖော်ခြင်းစမ်းသပ်မှုတွင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် CPU တစ်ခုတည်းသာလုပ်ရသည်ထက်အဆ ၂၀ ပိုမြန်သည်။
TFLOP များနှင့်ဆာဗာတစ်ခုပင်ပျောက်ဆုံးသွားသောအခြားနည်းပညာများအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်တော်တော်လေးသိသာထင်ရှားပါသည်။ Huawei သည်အရေးပါသောအရည်အသွေးမြင့်တက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသောကြောင့်စွမ်းရည်မြင့်မားပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် SoC အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။
Huawei Consumer Business Group ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Richard Yu ကစမတ်ဖုန်း၏အနာဂတ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခေတ်သစ်၏တံခါးခုံ၌ရှိနေသည်ဟုပြောကြားခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကကြောင်းစမှတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ကြောင်းထောက်ပြသည်, Kirin 970 သည်တိုးတက်မှုအသစ်များတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည် ငါတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအားကောင်းတဲ့ AI စွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုဆောင်ကြဉ်းပေးပြီးယှဉ်ပြိုင်မှုထက်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်။
Richard Yu, Huawei Consumer Business Group ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာ၏အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များက၎င်းသည်ဖြစ်ဆဲဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည် TSMC မှထုတ်လုပ်သော 10nm လုပ်ငန်းစဉ်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Octa-core ပရိုဆက်ဆာသည် 18-core GPU၊ dual ISP နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် Cat XNUMX LTE modem တို့ပါဝင်သည်။ CPU သည် ARin Cortex-A960 core လေးခုနှင့် ARM Cortex-A73 cores လေးခုပါသည့် Kirin 53 နှင့်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်ဤအချိန်သည်အမြန်နှုန်းသည် 2,4 GHz နှင့် 1,8 GHz အသီးသီးရှိသည်။ Kirin 970 လည်းဖြစ်သည် ပထမဆုံးစီးပွားဖြစ် SoC သည် Mali-G72 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်, ARM မှနောက်ဆုံးပေါ် GPU ကို Huawei ၏ပြောကြားချက်အရ G72 ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် Kirin 970aဖြစ်လိမ့်မည် 20% ပိုမြန် Kirin 960 ထက်ပိုပြီးပေါ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ၅၀% ပိုမိုထိရောက်သည်.
၎င်းသည် 4K video encoding and decoding (H.265, H.264 နှင့်အခြားသူများ)၊ ၁၀-bit color (HDR10) နှင့်အခြားအရာများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဒါ့အပြင် Huawei ကဒီ chip ကို developer တွေအတွက်ဖွင့်ပေးနေပြီ ၎င်းနှင့်ပါတနာများနှင့်၎င်းအတွက် Kirin 970 သည် Tensorflow / Tensorflow Lite နှင့် Caffe / Caffe2 တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei သည် Kirin 970 ကို၎င်း၏ AI စွမ်းဆောင်ရည်များပါသည့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုပြသသည်
Huawei Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့ကိုအောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် Kirin 16 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ဖြင့်ပြသမည်ဖြစ်သည်
Huawei Nova 2၊ ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ